Kuongorora kweakakosha emusika wemusika | Ehupfumi Zvemari
Vashandi vanogona kusarudza kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzekutsvaga kuti vazive mamiriro ezvinhu emari yavo. Nguva dzose zvichienderana nezvinodiwa, uye pakati pazvo pane kumira kune nyowani teknolojia mazano. Izvo zvinopihwa nemasangano emari kune avo vatengi kuitira kuti nenzira iyi kuteedzeresa kwakaringana kwechikamu chega chega chekutengeserana chingateedzwe. Kubva chero kupi, kunyangwe pazororo kana kugara kunze kwenyika.
Zvakajairika kuti vamwe varimi, mushure mekuita mabasa ekutenga pamusika wemasheya, vanofuratira mutengo wavo kwenguva yakati rebei kana shoma. Izvi zviito zvinogona kuburitsa mamiriro asingafadzi uye pamwe neapo neapo zvisina kunaka kushamisika zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Ichi chikonzero chinokurudzira iwe kuti uve wakawanda kuchakamirirwa mutengo yemitengo yemusika wemasheya.
Dambudziko riripo panguva chaiyo yekuzvibvunza iwe kwaunofanira kuziva kuti ma investments ako mumari ari, nzira dzipi dzaungashandisa kutarisa chimiro chenzvimbo yako yekudyara kana kuti ndeapi ruzivo iwe aunowana nezve kukosha. Mupfungwa iyi, unogona kuenda kune maviri kwazvino ruzivo ayo ari nyore kusvika. Kune rimwe divi, kubhangi chaiko kunoiswa account yako yekuchengetedzeka. Uye, pane imwe, nekuenda kune yakasarudzika midhiya.
1 Kutevera-up: sei?
3 Internet kana nhare
4 Unoshanda pazororo
5 Maitiro ekuita
6 Kunyorera zvikumbiro
Nezve kwekutanga kwesosi, iyo sisitimu kwainoshanda kazhinji ichakuzivisa nezve kutenga kwakatengwa, pamwe neshanduko yakaitwa, asi kwete nezve shanduko yayo, inozotakurwa nemuzivi. Asi inokupa iwe maturusi kuitira kuti ugone kunyatso tarisa yako yekudyara. Inogona zvakare kuteverwa kuburikidza ne foni kubhengi izvo zvinokupa iwe nemutengo wekudyara kwako panguva inodiwa, asi pamwe nekudzikisira kuti inoshanda kune imwe nguva, kungave nekuti iwe unoda kutengesa kana kungoita kusaziva kwekuti kukosha kwakapihwa sei mushure menguva refu usingazive ayo musika wemasheya shanduko.
Maitiro anonyanya kushanda ndeekuita nekubhanga. pamusoro mutsetse iyo inopa ruzivo munguva chaiyo pamitengo yese yemakuru indices epasi rese. Kubva chero kwaunoenda, ichikubvumidza iwe kuti uchinje mashandiro anoenderana nedhata nyowani: ita yakazara kana zvishoma chikamu kutengesa, shandisa kurega kurasikirwa, ita zvekutenga, nezvimwe. Uye, zvine mukana wakakura kuti zvinogona kuitwa zvese kubva kubasa, kumba kana pazororo, kunyangwe iwe uri kune imwe nyika kuenda. Iwe unongoda chete password yakapihwa nebhangi kuti uwane ruzivo urwu uye ushande pamwe nesangano.
Kune avo vasingakwanise kana vasina mukana wekubhengi online, Mhinduro kudambudziko iri ichave yekugara uchienda kunhepfenyuro, kunyanya iwo akasarudzika. Mapepanhau ese epepanhau renyika anopa ruzivo pamutengo wekuchengetedzwa kwemari, kunyange hazvo mamwe acho achingopa iwo akanyorwa pane “IBEX 35". Izvo zvinofanirwawo kutariswa kuti ruzivo urwu ruchazowanikwa ruchazove rwezuva rapfuura, kwete kubva pachikamu chimwe chete, saka ichave chete inoratidza ruzivo, isingatore danho kunyorera mukuvhiya kana kwenguva pfupi-yenguva.
Mune ino kesi, zviri nani kuenda kune zvimwe zvinyorwa zvinopa ruzivo, kana zvisiri munguva chaiyo, hongu yakanonotswa asi nemaminetsi mashoma kunonoka. Chaizvoizvo, inowanikwa kubudikidza neInternet sezvo huwandu hwakawanda hwemusika wemasheya uye hupfumi ruzivo maseru zvinopa mukana uyu, zvakare zvichiratidza huwandu hwekutengesa, mashoma uye mauraamu echikamu chega chega chekutengeserana, pakati pemamwe ma parameter. Ivo vane mukana wekuti muzviitiko zvakawanda, haufanire kunyoreswa kuti uwane chero eaya masevhisi, asi zvinopesana, vanobvumidza kwavo kuwana vakasununguka.
Internet kana nhare
Kune avo vanhu vasina Access Internet Mhinduro iri kuburikidza nekirin'i diki, asi mune iyi nyaya kuburikidza neye teletext sevhisi kubva kune iyo musika wemasheya data yemutengo wezuva unogona kuwanikwa, uye kunyangwe iinewo kunonoka kudiki mune ruzivo rwayo, inogona kushanda zvakakwana kune chero emergency mamiriro nekuda kwekushaya dzimwe nzira dzekuwana iyi ruzivo.
Imwe yemhinduro dzinobudirira dzinowanikwa nevashambadzi vadiki nepakati ndeiyo inopihwa nharembozha kuburikidza nekubatana kune chiteshi chine sevhisi iyi uye, iyo inobvumidza mashandiro enguva chaiyo mukati Kuramba Market uye mukutsinhana kwakakosha kwazvo kwenyika dzese, pamwe nekontrakiti yeramangwana uye sarudzo mu MEFF (muspain yemari yemusika musika) uye misika yeEurex (misika yemari yeEurope yemari). Kubudikidza neshumiro iyi unogona zvakare kushandisa maturusi ayo anobatsira mushandisi kuzviitira sarudzo dzekudyara.
Chero zvazvingaitika, mune zviitiko zvekunakidzwa kana kungoregedza kubva pane zvezuva nezuva, zvakanakisa kukanganwa kwemazuva mashoma kuti zviwanikwa zvedu zvinoshanduka sei uye izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nehurongwa hwakapetwa hunowanikwa kune wese munhu. Chekutanga kusiya zvese maakaundi edu mu kukwana kwesendiko kuti, kubvisa nzvimbo dzekutenga kuti utange nzira yekutenga kana vasvika kubva parwendo.
Uye, chechipiri, pachishandiswa zvirevo zvine mamiriro izvo zvinokonzeresa kuti nzvimbo dzekutenga dzigadziriswe pamutengo wakati. Izvo zviri nyore kushandisa uye zvinobvumidza mushandisi kushandisa mazuva mashoma nerunyararo ruzere rwepfungwa pavanoenda achiziva kuti odha yavo ichaiswa zvine mutsindo kana ikasvika pamutengo watakapa kutengesa masheya, ayo anogona kunge achienderana, semuenzaniso, nedanho rekudzivirira. Iyi yekupedzisira ndiyo imwe nzira inokurudzirwa ye Nguva dzezororo sezhizha, Isita kana Kisimusi. Uye, pasina chero komisheni kana muripo kubva kubhangi kana kubhengi rekuchengetedza.
Mukudyara kwenguva pfupi, zvakanyanyisa kukosha kuti tizive nezvekuti kuchengetedzeka mupotifoliyo yedu yekudyara kunotemerwa mari zvakadii. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Izvi zvinodaro nekuti mashandiro e tenga utengese dzinofanira kuitwa nekukurumidza kukuru. Kunyangwe mumaawa mashoma kana misika yezvemari ichikurudzira. Mupfungwa iyi, hatizove nesarudzo kunze kwekuve nechiridzwa chisina kujairika chinotipa nemutengo wezvemari munguva chaiyo.
Kune rimwe divi, kana mari dzekudyara dzichizotora nguva yakareba yekugara, hazvisi zvekukurumidza kutora danho iri. Asi zvakadaro, zvinokurudzirwa kwazvo kuve ne kubata nguva uye ruzivo rwenguva dzose yemamiriro chaiwo ekufamba kwedu mumisika yemari. Muchiitiko icho, pane imwe nguva kana imwe, zvinodikanwa kuti tichinje nzira yedu yekudyara. Mupfungwa iyi, unogona kugadzira chirongwa chinogadzirisa kuvandudzwa kwemari mumusika wemasheya nenzira chaiyo. Chero hupi hupfumi hwaunopa sewe mudiki uye wepakati investor. Ichi chiitiko chinogona kukuunzira mabhenefiti makuru kubva zvino zvichienda mberi.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kunetseka zvakanyanya kubva ikozvino zvichienda mberi sezvo uchigona kurodha akateedzana eetekinoroji maficha ane basa rekugadzirisa zviwanikwa zvako Uye zvakare, nemubatsiro mukuru wekuti ivo vakasununguka uye vanogona kuchinjirwa kune chero Technological mudziyoChero zvazvingava, hapana zvirambidzo pane ino yehunyanzvi chimiro. Kune rimwe divi, haufanire kukanganwa kuti izvi zvinoshandiswa zvinokupa mamwe masevhisi akawanda kupfuura izvo zvaungangoda kutanga kugutsa ichi chaicho kudiwa uye kuti chinyorwa ichi ndicho musoro wenyaya.
Nepo pane zvinopesana, iwe unogona kuzvibvumira kuti uongorore uye uongorore kuti ndedzipi dzinopisa tsika dzenguva. Saka kuti iwe ugone kupinda kana kubuda mumisika yemaketi uine hukuru hunovimbisa hwekubudirira. Muchidimbu, iri tool izvo hazvifanirwe kunge zvichishayikwa mune chero zano rekudyara iwe rauri kuzokudziridza kubva panguva dzino chaidzo. Hazvishamisi kuti iwe haugone kuita pasina kufambira mberi kwetekinoroji kukutsigira iwe mukuita sarudzo dzakanakisa munyika inogara yakaoma mari. Kwete zvekare hapana zvishoma.
Nekuti pakupera kwezuva izvo zvazviri kuita kuita kunobatsira kuchengetedza pamwe nezvivimbiso zvakakura zvekubudirira uye nezvose zvinokwanisika zvinotsigirwa, kunyanya izvo zvakatorwa kubva kumatekinoroji matsva. Iye zvino wave nemukana wekupinda iyi nyowani yekudyara modhi iyo pasina mubvunzo ichakubatsira iwe zvakanyanya kugadzirisa mashandiro ako ese mumisika yekutengesa. Neiyi nzira, iwe uchaona kuti kubva ikozvino zvinhu zvichange zviri nani kwazvo kwauri iwe nekuchengetedzeka kwaunobata mumisika. Kusvika padanho rekusvika pamhedziso yekuti zvave zvakakodzera kushandisa iyi ruzivo system kuongorora maitiro emusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuongorora kwemaitiro emusika wemasheya